Dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed oo digniin u diray Kuuriyada Waqooyi - Wargane News
Home Somali News Dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed oo digniin u diray Kuuriyada Waqooyi
Wadamada Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Arbaco ah digniin culus u diray wadanka Kuuriyada Waqooyi oo todobaadkan shaaciyey inuu cirka u diri doono Satellite.
Balse dalalka jaarka la ah Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in aysan Satellite direyn balse doonayaan inay tijaabiyaan Gantaalada ridada dheer oo uu in muddo ah ka shaqeenayey kuuriyada Waqooyi.
Raysalwasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa maanta sheegay in ciidamadooda ay heegan ku jiraan isla markaana soo ridi doonaan hadii gantaalka Kuuriyada Waqooyi uu soo galo hawadooda.
Sidoo kale dowlada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in hadalada kasoo baxaya Kuuriyada Waqooyi ay khatar ku tahay amniga caalamka, isla markaana si toos ah uga horimaanayso Qaraarkii Qaramada Midoobay kasoo saaray joojinta tijaabooyinka hubka ee wadankaasi Kuuriyada Waqooyi oo isagu ka go’adoonsan caalamka intiisa kale.
Kuuriyada Waqooyi ayaa bishii lasoo dhaafay ee Janaayo sheegay inay tijaabiyeen bambaanadii ugu cusleyd ee hubkooda Nuliyeerka, wuxuuna dalkaasi si weyn dadaal ugu jiraa inuu helo gantaalo awoodleh oo meel fog gaari kara isla markaana xambaari kara bambaanooyinka nukliyeerka
Somaliland: Health Minister receives hero’s welcome in Buhoodle